Pôlisy misava… • AoRaha
Midoka tena ny Pôlisim-pirenena, amin’ny alalan’ny fanaovana tatitra momba ny fitomboan’ny lozam-pifamoivoizana nandritra ny fe-potoana voafetra teto an-drenivohitra, fa andry iankinan’ny fifamoivoizana ry zareo. Inona moa fa tsy ny fiarovan-tena amin’ny saika nanesorana taminy ny andraikitra fanaovana ny fisavana eny an-dalam-be na ny « Police de la route » no tena hafatra mafonja tiany ho ampitaina. Tokony hazava anefa fa tsy ny fitomboana na ny fifehezana ny loza no tena fototry ny olana na sanatria nilam-baniny tamin’ny fampiatoana ny fanaovan’ny Pôlisim-pirenena an’io asa iray eny an-dalambe io. Tsy mila averina, angamba, efa ho an-taonany maro nifandimby izao, fa tafiditra ao anatin’ireo sehatra telo anjakan’ny kolikoly ny asa iantsorohan’ireto mpitandro filaminana ireto.
Raha ny marina, dia iray amin’ireo fototra mampilamina ny fifamoivoizana an-tanàn-dehibe ireo pôlisy raha tsy hitaniasa afa-tsy ny fisorohana ny fandikan-dalàna ataon’ireo mpampiasa lalana (gaboraraky ny fiara mpitatitra sy ny tsy fahatomombanan’ireo fiara mampiasa lalana…) ; fanaraha-maso ny fivezivezen’ny olona (olon-dratsy) na fitaovana na kojakoja mamono sady manimba vahoaka ary ny entana (fitaovam-piadiana, zava-mahadomelina, harem-pirenena sy ny sisa) ! Iaraha-mahita ny baranahiny manjaka amin’ireo arabe manerana ireo tanàn-dehibe toy ireo renivohi-
paritany enina eto Madagasikara. Miverimberina foana ny hoe ny toe-tsain’ny vahoaka mihitsy no efa potika, saingy iza no natao hanitsy sy hifehy izany ?
Sarotra ny hanilika ny andraikitra rehetra tamin’ny tsy
fahombiazana samirery any amin’ireo pôlisy. Tokony hiaiky kosa izy ireo, mila mandini-tena ka manova famindra (tena fiovana mahery vaika mihitsy), fa ny fijoroany amin’ny maha mpitandro filaminana azy ireo, toy ny filaminan’ny fifamoivoizana, dia mitaky toe-tena sy tsy fitsipi-pitondran-tena mendrika : marina sady tsy voasanda vola. Mba tsy hosoketain’ny mpitazana amin’ny alahelon’ny « otra » sy « risoriso » ary « kolikoly » no antony nampimenomenona azy ireo, rehefa nivoaka ilay fanapahan-kevitra fampiatoana ny
fisavana nataon’ireo pôlisy tamin’ny fitaovam-pifamoivoizana. Angamba, efa misava izao ny toetra sy fomba ratsy rehetra. Enga anie hisava araka ny adidy sy andraikitra ankinina aminy amin’izay ry zareo.